ကြိုးရှုပ်​​တော့မည့်​ ရုပ်​​သေးရုပ်​​​လေးများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ကြိုးရှုပ်​​တော့မည့်​ ရုပ်​​သေးရုပ်​​​လေးများ
Posted by naywoon ni on Jun 7, 2014 in Poetry |7comments
တစ်​ခါတစ်​ခါ သနားမိ ။
တစ်​ခါတစ်​ခါ ​ဒေါသထွက်​မိ ။
တစ်​ခါတစ်​ခါ ကျပြန်​​တော့ မြင်​ပြင်းကပ်​မိပြန်​​လေ​ရော ။
မက်​​လောက်​စရာ ​မျှော်​လင့်​ချက်​​လေးပြပြ ပြီး
​ခွေး​ပေါက်​စန ​လေး​တွေ အစာနဲ့မြူဆွယ်​ပြီး
တစ်​စင်​နဲ့ တစ်​စင်​ ကြိုးအဆွဲပြိုင်​
အက လည်းမြိုင်​လာ​ပေါ့ ။
က ကွက်​​တွေ အပြိုင်​ကျဲ​နေရတာနဲ့
အို ….. အသင်​ အရုပ်​များ
၃ ဇွန်​ ၂၀၁၄
ခင်ဗျား ကဗျာ ဖတ်ရတာ မောလိုက်တာ ကိုနေရယ်…။
ဒီကဗျာတော့ သဘောပေါက်တယ် အဘနေ၊
ရုပ်သေးစင် ၂စင် အပြိုင်ကျဲ ၊မာနတွေကဲနေကြတာ၊
စင်အောက်ကကြည့်တော့ ကြိုးတွေ မြင်နေရ။ကြိုးဆွဲသူလည်း မြင်နေရ။
သူတို့ခမျာ ငါတို့ ကြိုးစားပန်းစားကတာကို သဘောကျနေကြတယ်ထင်နေကြသေး။
ကြိုးရှုပ်တော့မယ့် ဆိုရင် ပိုမှန်မယ်။
ဟုတ်​ကဲ့ အန်​တီဒုံ နားလည်​တယ်​ဆိုလို့ အား​တော့ တက်​သား ။ မဲ့ဆိုတာက စကားနဲ့အ​ပြော မယ့်​ ဆိုတာက စာနဲ့အ​ရေး အဲ့ဒိလို ထင်​ပါရဲ့ ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ( အဲ့သလို​ရေးတာအမှန်​ ) ဒါ​ပေမဲ့ ဆိုတာက စကား​ပြော ။ ဆို​တော့ကာ မယ့်​ ဆိုတာက နဲနဲ​ပျော့​ပြောင်းသလားလို့ ။ မြန်​မာစာသည်​ တို့စာ ဆိုတာနဲ့ မြန်​မာစာသည်​ ဒို့စာ ကွာသလိုပ ။ ကျွန်​​တော်​က ကဗျာကို စကား​ပြောနဲ့ ​ရေးချင်​တာ ။ အသံမာမာ အဲ့ အသံထွက်​ပီ​အောင်​ ​ရေးချင်​တာ ဖြစ်​တဲ့အတွက်​ မဲ့ လို့ သုံးလိုက်​မိတာပါ ။ ​နောက်​ ဆရာသမားအ​ယောင်​​ဆောင်​​တွေ ဝါးချတဲ့ စကား တစ်​ခုရှိ​သေးဗျ
ကဗျာဆိုတာ က၀ိ ပစ္စည်း တဲ့ ။ ကာရံကိုငဲ့​သောအားဖြင့်​ သတ်​ပုံကို သဒ္ဒြာ လိုသလို ပြင်​လို့ ရ ဆိုလား ​ပြောသံကြားဖူးတာပဲ။
ဒီက​နေပဲ ကိုဘလက်​ကို လည်း လှမ်း​ပြောရဦးမယ်​ ။
ကျွန်​​တော်​တို့ ဆရာသမား ​ပြောဖူးတဲ့စကားလုံး​လေးပဲယူသုံးပါရ​စေ။
မ​ကြောက်​ပါနဲ့ ကိုဘလက်​ရယ်​ သံ​ချောင်း​ခေါက်​တာပါ။ ကဗျာဆရာက မီးကင်း​စောင့်​တဲ့ တာဝန်​ယူထားပြီး မီး​လောင်​တာ​တွေ့လို့ သံ​ချောင်း​ခေါက်​အချက်​​ပေးတာပါ ။ ခင်​ဗျားသာ ရွာတံခါး​စောင့်​ဖို့ တာဝန်​ပျက်​ကွက်​​နေတာ ။ ​နော့ …..
ကြိုးရှုပ်​ကာ မကနိုင်​လဲ ရပ်ဖို့ လမ်းမမြင် ထပ်ရှုပ် မဲ့ နောက်ကြိုး အသစ်တွေ ဘဲ များလာမယ်ထင့် အဘနီ ရေ့။
အဲဒီရုပ်သေးတွေကပေါ့. . .
ရွှေချည်ကြိုးဆွဲရာ မက ပါရစေနဲ့. . .တဲ့. . .
”မဲ့ ”ဆိုတာကို မြန်မာဝါကျမှာ
အငြင်းဝါကျတွေမှာ ထည့်သုံးရတာလို့တော့ ဖတ်ဖူးတာပဲ. .
အငြင်းးဝါကျဆို မဲ့ ပေါ့
အန်​တီဒုံမာ ​အောင်​ရဲလင်း အဲ့ ​အောင်​ရဲလင်းထက်​​အောင်​ရဲလင်းနဲ့ ပိုတူတယ်​ ဆိုလား အဲ့ ဆက်​ဆက်​နဲ့ ကမ်းကြီးတို့ကို ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​ ။ မဲ့ နဲ့ မယ့်​ ဒါ​ပေသည့်​ စကား​ပြေဆန်​ဆန်​ပဲ ” ကြိုးရှုပ်​​တော့မည့်​ ရုပ်​​သေးရုပ်​​လေးများ ” လို့ ခပ်​တည်​တည်​​ပြောင်း​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ။ အသံအ​နေအထားအရ နဲနဲ​တော့ ​ထောက်​သွားမလား မ​ပြောတတ်​ဘူး ။ ဖတ်​ရတာ တစ်​မျိုးဖြစ်​သွားတယ်​ ။ ​စော​စောက​လောက်​ အားမပါ​တော့သလိုပဲ ။ အနာဂါတ်​ကာလ စကား​ပြောအသုံးမှာ မယ့်​လို့ ပြထား​ပေမဲ့ လွယ်​လွယ်​ကူကူ မဲ့ လို့ပဲသုံးကြတယ်​ ။ လာမဲ့စ​နေ​နေကျရင်​ – ဆိုတာမျိုး​ပေါ့ ။ စကား​ပြေအ​ရေးနဲ့ ဆိုရင်​ ” လာမည့်​စ​နေ​နေ့ကျလျှင်​ ” ဖြစ်​​ပေလိမ့်​မယ်​ ။ အဲ့အလွယ်​သုံးရယ်​ ” မယ့်​ ” ဆိုတာကို အသံ​လျော့ထွက်​မှာစိုးတာရယ်​နဲ့ “မဲ့ ” လို့ သုံးလိုက်​မိတာပါ ။ ခု​တော့ခပ်​တည်​တည်​ပဲ ပြန်​ပြင်​လိုက်​တယ်​ ။